Previous Article Goodluck Jonathan ezigagooro onye isi ala Ijipt a hoputara ohuru ozi nkwado
Mmadụ atọ ndị nta akụkọ so ndị otu Oshiomole eme njem tufuru ndụ ha. A na-akọwa na otu ụgbọala gwongworo nyahiere aka, were makwuru, ma kurie ụgbọala oti mkpu Gọvanọ Oshiomole, were gbuo mmadụ atọ ndị nta akụkọ.
Ndị nta akụkọ ndị ahụ bụ ndị na-arụrụ AIT na ITV. Ụlọ mgbasa ozi ndị ahụ họpụtara ndị nta akụkọ ahụ ka ha na-eso Oshiomole. Rochas Okorocha zigakwaara ndị AIT, ITV na NUJ ozi iti aka n’obi maka ọnwụ ndị nta akụkọ a.